टि भि , रेडियो र फेसबूकका भित्ताहरु सबै एस.एल.सी को रिजल्ट आएको खबर फैलाइरहेका थिए । कम्प्युटर अगाडि बसेर रमाइरहेका मेरा आँखा अगाडि एकाएक सात बर्ष अगाडिका कुराहरु नाच्न थाले । रिजल्ट आएको थाहा पाउनसाथ ४ बजे नै उठेको र पत्रीका खोज्न बिहानभरी भौतारिएका क्षणहरु रमाईलै थिए ।
बिगतलाई सम्झिदै हराउदै थिए एकैछिनमा फुपुको छोरा कोठामा आएर रिजल्ट हेरिदिन भन्यो । एउटा साइटमा सिम्बोल नम्बर र जन्म मिती राख्नासाथ रीजल्ट कम्प्युटरको स्क्रीनमा एकैछिनमा देखियो । "ओहो! केटोले त ८५ % ल्याएछ ।" रिजालट देख्नासाथ खुशी र आश्चार्य मिश्रित वाक्य मैले बोलिहाले । " जम्मा ८५ % " उसले मुखबाट फ्यात्त निकालिहाल्यो । म छक्क परे । ८५ % पनि जम्मा भयो रे । खै मैले बुझ्न सकिन । ऊ आफ्नो परिश्रमको फल अली बढी नै मीठो भएकोमा मख्ख पर्दै कोठाबाट निस्कियो ।म फेरी सम्झिन थाले मेरो सात बर्ष अगाडिको एस.एल.सी नतिजा । " त्यतिबेला र अहिले तुलना गरेर पनि त भएन नी । " Time value of money" हिसाब गरेझै हरेक बर्ष १ प्रतिशत जोड्दै गए , मेरो भन्दा त बढी रहेनछ । म सन्तुस्ट भएँ ।
एकैछिनमा मामाघरबाट एउटा भाईको फोन आयो । उसले ५ वटा सिम्बोल नम्बर टिपायो । शायद सबै जना एउटै क्लासका थिए । मामाघरको त्यो खरले छाएको स्कुल , बडेमानको चौर , आकाशे रङ्को सर्ट लगाएर चौरमा खेलिरहेका बिद्यार्थी ,अझै पनि मेरो मनस्पटलमा ताजै छन । माद्यामिक तहसम्म भाको पनि भर्खर २ बर्ष भयो होला । सानैमा पढेको कथाको कछुवा जस्तो नेट स्लो भए पनि आखिर रीजल्ट हेर्ने साइट खुलेरै छाड्यो । मैले एक एक गर्दै सबै सिम्बोल नम्बरको नतिजा हेरिदिए । तर बिडम्बना ५ जना नै फेल भएछन । ३ जनालाई ईंग्लिश र २ जनालाई बिज्ञान बिषय लागेछ । कल ब्याक गरेर रिजल्ट सुनाउने साहस नै जुटेन । एकैछिनमा उतैबाट फोन आयो । सुन्न आतुर तिनिहरुको कानलाई नराम्रो खबर सुनाउन बाध्य भएँ ।
गाउ नै भए पनि त्यति दुर्गम त थिएन । अझै बिकट गाउको हालत के होला ? के एस.एल.सी ले साच्चिकै विध्यार्थीको क्षमता जाच गर्ला त भन्ने प्रश्न मनमा उठिरह्यो । गाउँमा दिनभर मेलापात गरेर , हातमा ४ वटा किताब च्यापेर पढेका बिध्यार्थी र शहरका सुबिधासम्पन्न भवनमा दर्जनौ किताब पढेका विध्यार्थीलाई एउटै फलामको ढोका पार गर्न लागाउनु जायज होला र ? अब के गर्लान ती फेल भएका बिद्यार्थीहरुले । अरु कती होलान त्यस्ता बिद्यार्थी जो त्यही एस.एल.सी को नतिजाको कारण जिवनलाइ नयाँ मोड दिन वाध्य छन । यस्तै यस्तै कुराले दिमाग भारी भैरहेथ्यो एकै छिनमा मामाघरकै भाईको नम्बरबाट मोबाइलमा sms आयो ," यो सिम्बोल नम्बर एकचोटी फेरी हेरी दिनु न । "
Posted by Trilochan Bhattarai at 11:00 PM 1 comment:
२०६६ फाल्गुन २० गते कलेजमा पढाइ नभएकाले हामी चोभार नजिक जलबिनायक घुम्नका लागि गयौ । एकैछिन त्यही घुम्यौ । मन्जुश्रीले पहाड काटेर उपत्यकाको पानी बाहिर जाने मार्ग बनाएको ठाउँ पनि हेर्यौ । किम्बदन्ती पनि कस्ता कस्ता पत्यौनै गाह्रो पर्ने ,तर काटिएको ठाउँ हेर्दा त हो नै जस्तो लाग्थ्यो । "तर कस्तो हतियारले काटे तेत्रो अजङगको पहाड ?" ।".. मन्जुश्री त धेरै बलिया पो थिए होलान .... " यस्तै यस्तै उत्सुकताहरुले सबैको मनमा डेरा जमाइसकेको थियो । त्यहाबाट एउटा पहाड देखिएको थियो । डाडा देखेपछी केटाहरुको मन कहाँ थामिन्थ्यो र ?? अर्को दिन त्यो डाडा चड्ने योजना भयो ।
अघिल्लो दिनको योजना अनुसार हामी २१ गते बिहान १० बजेतिर बसपार्कमा भेट्यौ । साजन घरायसी कारण र सरोज थकाई लागेको कारण देखाइ आएन र शंकर किन आएन थाहा भएन । शंकर घुम्न जाने बेलामा त्यती आउँदैन । खै किन हो ?
दक्षिणकाली यातायात चढेर हामी १० जना गन्तब्यतिर लाग्यौ । टौडहबाट केही पर ओर्लियौ र डाडातिर लाग्यौ । चाउचाउ ,बिस्कुट तलै पसलमा किन्यौ ।केही समय हिडिसकेपछी बोसन भन्ने रमाइलो गाउ आईपुग्यो,तर त्यहाँ पानीको अलि अबाभ रहेछ । सँगै लेगेको पानी सकिसकेको थियो । अरु ठाउँमा जादा पानी प्रसस्त हुन्थ्यो ,बाटैपिच्छे मुहान वा धाराहरु हुन्थे । तर शायद त्यो उपत्यकाको दक्षिण भेग परेर होला पानीको अली अबाभ् भएको । एउटी बजैको घरमा एक बोतल पानी माग्यौ । बजैले पानी दिदै भन्नुभ्यो "डाडा पारी एउटा मात्रा कुवा छ ,अली टाढै पर्छ ।"
फेदमै एउटा मन्दिर रहेछ सायद त्यही थियो होला चम्पादेवी मन्दिर ।घुमघाम क्रममा त्यती जानकारी लिने गर्दैनौ त्यसैले नि कती ठाउको त राम्ररी नाम पनि थाहा हुँदैन । यसरी हिंड्नुको मज्जा पनि बेग्लै छ । देवीको दर्शन गरेर हामी अझ माथि लाग्यौ । लछ्य एउटै थियो माथि डाडाको टुप्पामा पुग्ने ,बाटो होस् वा नहोस् ,कुनै पर्बाह छैन ।
जतिजती उचाइ बड्दै जान्थ्यो ,लाग्यो हामी सफलताको नजिक पुगिसक्यौ । एउटा अद्रीश्य युद्द हामीले जित्न थालिसक्यौ । डाडाबाट उपत्यकाको द्रिश्य प्रस्ट देखिन्थ्यो र त्यो धरहरा पनि जुन सधैं हाम्रो adventurous यात्राको दर्शक बन्ने गर्छ । हामी उपत्यकाको जुनसुकै डाडा चढेपनी त्यो धरहरा निराश नमानी हामीलाई हेरिरहे जस्तो लाग्छ ।
तर डाडामा चड्ने बाटो भेटियन,वा भनौ बाटो हामीले जानी जानी हरायौ सधैं झै । जङगल भित्र एउटा खोल्सो रहेछ ,शायद बर्षाको भेलले गाउमा पस्ने बाटो थियो त्यो खोल्सा । जे होस् हामीले खोजेको जस्तो थियो त्यो मार्ग । ओरिपरी घना जङगल वा भनौ घना झाडी ,रुखहरु त्यती ठुला थिएनन तर पनि झाडी भने असाध्यै डरलाग्दो,चकमन्न र सुनसान थियो र बिचमा उजाड ढुङ्गा र बालुवा मात्रा भएको खोल्सा । त्यही खोल्सामा नगन्य मात्रामा भएका जरा र भर पर्नै गार्हो हुने ढुङ्गाको साहारा लिएर माथि उक्लियौ । कोही साथीलाई पछाडि बाट धकेल्थे त कोही अगाडिबाट लौरिको मदतले तान्थे ।".. ओए त्रिलोचन अली राम्ररी समाउ है ,यो लठी अली कम्जोर छ नि .. "सुमित मलाई सजग गराउदै थियो । तर कोही भने बिना साहारा independently माथि पुग्नुमा नै आफुलाई सामर्थ्यवान ठान्थे । फुस्रा माटो जहाँ टेक्यो कि लर्कने ,धन्न कुनै अप्रिय घटना भएन । "धन्नै नलडेको यार, luckily बचेँ ".... "यहाबाट लडेको भये त सिधै तारेमाम हुन्थिस "... "ओए मनिष त्यो ढुङ्गामा नटेक है ,झर्यो भने मलाई लाग्छ ... "... यस्तै यस्तै भय र गर्व मिश्रित बाणिहरु साथीहरुको मुखबाट बर्सीरहेका हुन्थे ।
केही माथि पुगेपछी सबै तिर्खा र थकानले हिंड्नै नसक्ने भईसकेका थिए । तर जङगल नै हो । के को नै कमी थियो र । लटरम्म लालिगुराश फलेको देखियो अनी त भई हाल्यो "के खोज्छस कानो ....आँखो । " रुख देखेपछी साथी कपिलको मन कहाँ थामिन्थ्यो र ,हेर्न नभ्यौदै उ रुखमा चढिहाल्यो र लालिगुरास टिप्न थाल्यो । टिप्दै भुइमा फाल्दै । केटाहरु लालिगुरास्को रातो रातो र रसिलो पुष्पदल खान मै ब्यस्त । ... "कस्लाई चाहिन्छ भन है म टिपिदिन्छु "... "ओए कपिल धेरै माथि नजा है,रुखबाट लड्लास "... "ओए त्यो हागामा नटेक .. भाच्चिन लाछ "... उमङ ,रमेश तलबाट चिच्यौदै थिए । तर आफ्नो सामर्थ्य देखाउने त्यस्तो सुनौलो मौका कहाँ छोड्थ्यो र उ.. रुखै बाट चिच्च्यायो .. " बालै भएन नि .. यस्ता रुख त कती चढियो कती.... ".. केही समय अघी सम्म रङगिन साडिमा सजिएजस्तो गुराशको बोटलाई क्षणभरमै हाम्रै अगाडि नङगाइ छड्यो । हामी के नै गर्न सक्थ्यौ र , त्यही लालिगुराश खाएर केही हद्सम्म भएपनी भोक र तिर्खा मेटाउन बाहेक ।
नाङगो गुराशको बोटलाई त्यही छाडेर हामी केही माथि उक्लियौ । त्यहा एउटा टेन्ट रहेछ । टेन्ट भित्र एउटा भाडामा पानी रहेछ ,तर त्यहाँ कोही मानिस थिएनन । डराइ डराइ भएपनी मजाले धित मर्नेगरी पानी खायौ । एकैछिन हिंड्नासाथ डाडाको चुचुरो आइपुग्यो ... जुन थियो हाम्रो गन्तव्यहिन यात्राको अन्तिम खुडकिलो ... जहाँ पुगेपछी संसारिक जन्जिरहरुबाट मुक्ती पाएको अनुभुती हुन्थ्यो,,, ब्यस्त जिन्दगी र शहरको कोलहालबाट धेरै टाढा । एउटा स्वतन्त्र राज्यमा जहाँ केबल आफ्नै शासन चल्थ्यो,केबल आफ्नै ......
(April 19,2010 मा फेसबूसका पोस्ट गरेको यो लेख मेरो पहिलो यात्रा सँस्मरण थियो । डायरिबाट सारेको हुनाले यसको शिर्शक डायरिको पानाबाट राखेको थिए । त्यसैबाट एक दुई लाइन मात्र इडिट गरी यहाँ पोस्ट गरेको हुँ । )
Posted by Trilochan Bhattarai at 10:09 PM2comments:
Posted by Trilochan Bhattarai at 4:11 AM7comments:
लाग्छ म त्यस्कै पछि पछि छु
जुन धेरै टाढा
क्षितिजमा हराइरहेको छ ।
अनगिन्ती परिचित अनुहारहरु
बाध्यता बनी चिच्याइरहेका छन्
मेरा हर पाइलालाई अघि बढाउन
तर निराश यी हत्केला
शिखर चुम्ने प्रयासमा
परिस्थिती र ठक्करमाझ
अन्धकार र भयानक भिडमा
अल्झिरहेको छ ।
निन्द्रालाई अँगालिरहेको बखत
मेरो आँखा अँधेरी खोज्न थाल्छन्
मेरा यी नयन वाध्य छन्
अक्षरहरु केलाउन, शब्द शब्द कोट्याउन
सोच्न विवश हुन्छु
तथ्य केलाउन थाल्छु
र स्वयंलाई प्रश्न गर्छु
कसको लागी र किन ?
जब नियाल्छु ती कौवाहरु
मानिसका वितृष्णाका पात्र
पर्बाह छैन केही
स्वतन्त्र उड्दै छन् खुला आकशमा
म भन्दा कैयौँ गुना भग्यमानी ।
सीमित रहदैँन यत्तिमा
र धावा बोल्दछ
एकदिन अवश्य उड्ने छु
त्यो शिखर चुम्ने छु
जुन म भन्दा धेरै टाढा छ
जुन क्षितिजमै हराइरहेको छ ।
Posted by Trilochan Bhattarai at 3:21 AM No comments:
Posted by Trilochan Bhattarai at 2:34 AM No comments:
Gosaikunda at the height of 4380m
Gosaikunda .... Heaven on Earth.This photo was taken on 1st Baishak, 2069.
Posted by Trilochan Bhattarai at 1:22 AM No comments:
सबैजना ब्लगकै चर्चा गरिरहेका हुन्छन ...आखिर यो ब्लगिङ भनेको के रहेछ त भनेर जान्ने कौतहलताले धेरै पहिलेबाट मनमा डेरा जमाइरहेको थियो...यसबारे नजिकै बाट बुझी कौतुहलतालाई मेटाउने प्रयास स्वरुप यो ब्लगको जन्म भएको हो...यदी मनमा यो जिज्ञासाले डेरा नजमाउदो हो त आज यो ब्लगको अस्तित्व शायद रहने थिएन होला..सकेसम्म आफुले जानेका, भोगेका र कल्पनामा उब्जेका कुराहरु शब्दमार्फत अलिअली श्रिंगार थपेर समेट्ने प्रयास गर्नेछु...
Posted by Trilochan Bhattarai at 10:10 AM No comments: